Ashraf Marwaan, jaajuuskii waynaa - Diblomaasi
Jaajuuskii waynaa, ganacsadihii Malyanneerka ahaa, diblomaasigii Ashraf Marwaan wuxuu dhintay afartii Nofeember 2007-dii. Wuxuu ahaa Masaari ku nool dalka Ingiriiska oo la rumaysanyahay inuu si mug leh uga qayb qaatay dagaalkii Masar/Carabta iyo Israa’iil ee 1973dii. Wuxuu ahaa jaajuus u adeegayey laanta sirdoonka ee MOSSAD. Dhanka kalena wuxuu qabay gabar uu dhalay madaxwaynihii hore ee Masar Jamaal Cabdinaasir.
Mossad, oo loo soo gaabiyay HaMossad leModiʿin uleTafkidim Meyuḥadim (Cibraaniga: המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, oo macnaheedu yahay ‘Machadka Sirdoonka iyo Hawlgallada Gaarka ah’), waa hay’adda sirdoonka qaranka ee Israa’iil. Waa mid ka mid ah hay’adaha ugu waaweyn ee Sirdoonka Israa’iil, oo ay weheliyaan Aman (sirdoonka militariga) iyo Shin Bet (amniga gudaha). Mossad waxay mas’uul ka tahay ururinta sirdoonka, howlaha qarsoon, iyo ladagaalanka argagixisada.
Sanadkii 1967-dii ayuu dhacay dagaalkii Carabta iyo Israa’iil oo ay Israa’iil ku qabsatay dhulka Masar ee Siinaay iyo buuraha Golan Haay ee Suuriya. Israa’iil waxay isticmaalaysay sirdoonno dhex xulay dhiigga waddamada Carabta sida Alie Cohen oo loo yaqaan boqorka basaasiinta, Israa’iil-na ay u taqaan halyey wayn ‘Our man in Damascus’. Masar oo hoggaanka la wareegay Anwar Saadaat oo taageero iyo garab istaag ka helay Midowgii Soofiyeeti ayaa isku diyaariyey dagaal si uu gacantiisa uu ugu soo celiyo dhulka Siinaay.
Ashraf Marwaan oo aan madaxtootada Masar ka agfogayn loona aqoonsan yahay ganacsade iyo diblomaasi ayaa la shaqo bilaabay sirdoonka Israa’iil sanadkii 1970kii. Xiriirro iyo wada haddallo sir ah ayaa dhex maray. Waxay ku wada hadli jireen erayo afjaaq ah oo micno gooniya samaynaya (codes). Wuxuu la socodsiin jiray abaabulka dagaalka Masar meesha uu marayo hubka, guutooyinka iyo fadhiyadooda. Waxaa jira shaki kale oo ah in Ashraf Marwaan uu ahaa sirdoon labo dhinacle ah (double agent).
6-dii bishii Oktoober, maalin Yahuudda u ah maalin cibaado oo loo yaqaano Yowmil Kabuur ayaa dagaal lagu qaaday Israa’iil, oo la ogsoonaa inay xog haysay. Anwar Saadaat iyo Madaxwaynihii Suuriya Xaafid Asad ayaa go’aanka dagaalka wada qaatay si ay dhulalkooda u soo ceshadaan. Nasiib darro se Suuriya kuma guulaysan. Dagaalkan oo socday dhowr iyo taban bari, Masar waxay ku guulaysaty inay dib usoo ceshato dhulkeedii Siinaay.
Taariikhdaan waxaa ku gadaaman isweyddiimo badan. Israa’iil haddii ay warhaysay maxay ugu diyaar garoobi wayday? Ma waxay ogaan weyday maalinta dagaalka lagu soo qaadayo? Ashraf Marwaan oo loo yaqaannay Isha Warka, xogtii uu bixiyey shantii bisha Oktoobar, Israa’iil ma dhayalsatay mise wey ku kalsoonaan wayday? Mise isha warka laftirkiisa ayaanba hayn xogta rasmiga ah?
Ashraf Marwaan wuxuu dhintay sanadkii 2007-dii ayaa dhimashadiisu noqotay arrin illaa hadda daah madoobi saaran yahay oo aan waxba laga ogayn. Wuxuu kasoo dhacay ama laga soo tuuray daar dhaladeed welisa lama hayo raadad sugan. Ma isaga ayaa isdilay mise waa la dilay? Sababta?.
Related Topics:Ashraf MarwaanFalanqeynjaajuuskii waynaaVideo
Qian Xuesen: Ninkii uu Mareykanka tarxiilay
Waa qoraa ka tirsan Diblomaasi. Wuxuu wax ka qoraa cilmiga Bulshada, nabadda iyo amniga, siyaasadda, sooyaalka, arrimaha bulshada, xallinta khilaafaadka, dhaqanka, Afka iyo aqoonta guud ahaaneed. Wuxuu bartay cilmiga Bulshada, nabadda iyo amniga. Heerka koowaad wuxuu bartay cilmiga bulshada (Sociology), heerka labaad ee jaamacada (Master degree) wuxuu bartay Nabadda iyo Amniga ‘Peace and Security. Siddoo kale qoraaga ayaa soo bartay cilmiga sheybaarka. Qoraagu wuxuu bare sarre ka ahaa jaamacada Bariga Afrika.
Waa Maxay Cilmiga Falsafada Siyaasada?
Sharka iyo khayrka: colaadda iyo nabadda
Warbixin ay Khamiistii soo saareen kooxda u dooda xuquuqda Israa’iil ee B’Tselem iyo Xarunta Xuquuqul Insaanka ee Falastiin ee fadhigeedu yahay Gaza (PCHR) ayaa lagu sheegay in milatarigu uu ku guul daraystay in uu baadho amarada ay soo saareen taliyayaasha sarsare oo aanay wax tallaabo ah ka qaadin askari kasta.
Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa Khamiistii sheegay in Israa’iil ay ku guul darreysatay in ay baarto toogashada ay ku dhinteen in ka badan 200 oo Falastiiniyiin ah, ayna ku dhaawacmeen kumanaan dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay xadka Gaza sannadihii la soo dhaafay, taas oo xoojisay in dacwadda maxkamadda caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) ay soo farageliso.
Milateriga Israa’iil ayaa diiday natiijada, iyagoo sheegay “rabshado ballaaran” oo ay soo abaabuleen madaxda Gaza ee Xamaas looga dan leeyahay in lagu gabbaadiyo weerarrada xudduudaha ah. Ciidamada ayaa sheegay in xadgudubyada la sheegay in si wanaagsan loo baaray, iyadoo askarta lagula xisaabtamayo.
Laga bilaabo Maarso 2018, dhaqdhaqaaqayaasha Gaza ayaa abaabulay mudaaharaad toddobaadle ah kuwaas oo markii hore ujeedkoodu ahaa in lagu muujiyo xaaladda qaxootiga Falastiiniyiinta ee ka soo jeeda dhulka hadda loo yaqaan Israa’iil, kuwaas oo ka kooban saddex meelood saddex meel dadka Gaza ku nool oo ka badan 2 milyan oo qof.
Balse Xamaas ayaa si degdeg ah u dooratay mudaaharaadyada waxayna u adeegsatay inay ku riixdo fududaynta go’doominta Israa’iil iyo Masar ay ku soo rogeen dhulkaas markii ay awoodda kala wareegeen xoogagga Falastiiniyiinta ee iska soo horjeeday 2007-dii.
Toddobaad kasta ilaa 18 bilood, kumannaan Falastiiniyiin ah ayaa isugu soo baxay meelo kala duwan oo ku teedsan xudduudda, inta badan ka dib markii ay Xamaas bas ka qaadeen. Kooxo mudaaharaadayaal ah ayaa gubay taayiro, dhagaxaan iyo bambaanooyin la tuuray, waxayna isku dayeen inay jabiyaan xayndaabka ammaanka.
Ciidamada Israa’iil ayaa riday rasaas nool nool, rasaas ka sameysan caag iyo sunta dadka ka ilmeysiisa oo ay ka soo ridayeen ciid dhinaca kale ah, waxa ay Israa’iil ku sheegtay in ay is-difaacday, si ay uga hortagto kumannaan Falastiiniyiin ah oo ku soo yaacay Israa’iil.
Dabka Israa’iil ayaa dilay ugu yaraan 215 falastiiniyiin ah, oo badankoodu aan hubaysnayn, oo ay ku jiraan 47 qof oo ay da’doodu ka yar tahay 18 jir iyo laba dumar ah, sida ay sheegtay xarunta Al-Mezan ee xuquuqal insaanka ee Gaza. Boqolaal kale ayaa si xun loogu dhaawacay banaanbaxyada, kuwaas oo ku dhaawacmay dabayaaqadii 2019. Qaar badan oo ka mid ah ayaa ka fogaaday xayndaabka xadka markii la toogtay. Askari Israa’iili ah ayaa toogasho ku dilay nin Falastiini ah oo wax toogta 2018 dhowr kalena waa lagu dhaawacay.
Laga soo bilaabo Abriil, 143 kiis oo loo gudbiyay xeer-ilaaliye militari qaab Israa’iil xaqiiqo raadin ah, 95 waa la xiray iyada oo aan wax tallaabo ah laga qaadin. Mid ka mid ah – dilka 14-sano jir Falastiini ah – ayaa horseeday in dacwad lagu soo oogo, iyadoo inta ka hartayna ay weli socoto, ayay tiri warbixintu. Waxay soo xigatay tirooyinka laga helay militariga Israa’iil iyadoo loo marayo codsi xorriyadda macluumaadka.
Askariga la dacweeyay ayaa lagu helay dambi ah “ku takri-fal awoodeed ilaa heer uu halis geliyey naf iyo caafimaad” iyadoo lagu xukumay gorgortan iyo hal bil oo adeega bulshada ah, ayaa lagu yiri warbixinta.
Taasi waa ka dib markii in ka badan 13,000 oo Falastiiniyiin ah ay ku dhaawacmeen ilaa 18 bilood oo mudaaharaadyo ah, oo ay ku jiraan in ka badan 8,000 oo uu ku dhacay dab nool. Ugu yaraan 155 ayaa u baahday in la gooyo, ayay tiri warbixintu. Waxa ay sheegtay in habka xaqiiqo-raadinta ee milatarigu uu kaliya dib u eegay 234 kiis oo Falastiiniyiin lagu dilay, oo ay ku jiraan qaar dhimasho ah oo aan xidhiidh la lahayn mudaaharaadyada.
Milatariga Israa’iil ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay baaritaannadaas u fuliyeen si “si qoto dheer oo qoto dheer” waxayna dacwado ku soo oogeen laba dhacdo oo askar lagu helay laguna xukumay “xabbis inta lagu jiro shaqada milatariga, tijaabinta iyo hoos u dhigista.”
Waxa ay sheegtay in kiisas kale ay wali taagan yihiin “sababo la xiriirta kakanaanta dhacdooyinka iyo baahida loo qabo baaritaan qotodheer.” Waxa ay sheegtay in “daraasiin dhacdo la xalliyay” tan iyo markii ay B’Tselem heshay tirooyinkeeda, kuwaas oo ay ciidamadu sheegeen in ay “dhaceen.”
ICC ayaa billowday horraantii sanadkan baaritaan ku aaddan dembiyo dagaal oo ay Israa’iil iyo Falastiiniyiintu ka geysan karaan Gaza tan iyo 2014-kii, markaasoo labada dhinac ay qaadeen saddexdii dagaal ee ugu dambeeyay tan iyo markii Xamaas ay awoodda la wareegtay.
Israa’iil ayaa diiday baaritaanka, waxayna sheegtay in maxkamaddu ay dhinac u xaglinayso, isla markaana nidaamka cadaaladda ee Israa’iil uu awood u leeyahay inuu sameeyo baaritaanno u gaar ah oo waafaqsan heerarka caalamiga ah. Waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ammaanku ay sameeyaan dadaal kasta oo ay kaga fogaanayaan in dadka rayidka ah ay waxyeello soo gaarto, ayna baaraan xad-gudubyada lagu eedeeyay.
Israa’iil kama mid aha maxkamadda ICC, laakiin saraakiisha Israa’iil waa laga yaabaa in lagu xidho dalal kale haddii ay dhiibto waaran. Israa’iil ayaa laga yaabaa in ay iska difaacdo baaritaanka iyada oo caddaynaysa in ay bilawday baaritaanno lagu kalsoonaan karo oo iyada u gaar ah.
B’Tselem iyo PCHR waxay sheegeen in Israa’iil ay ku guuldareysatay inay buuxiso shuruudahaas. Baadhitaanadeedu “dhammaantood waxay ka kooban yihiin millatarigu iskii isu baadha mana baarin xeerarka siyaasadda furan ee sharci-darrada ah ee lagu wareejiyey ciidamada ammaanka ama siyaasadihii la hirgeliyey intii lagu jiray mudaaharaadyada,” ayay yiraahdeen.
“Taas bedelkeeda, waxay si gaar ah diiradda u saarayaan askarta darajada hoose iyo su’aasha ah inay sameeyeen ficil lid ku ah amaradan sharci darrada ah.”
Yuval Shany, oo ah xubin sare oo ka tirsan Machadka Dimuqraadiyadda Israa’iil, xubinna ka ah Jaamacadda Cibraaniga ee Kulliyadda Sharciga ee Jerusalem, ayaa sheegay in Israa’iil ay u nuglaan karto tallaabada ICC-da ee ku aaddan jawaabta ay ka bixinayso mudaaharaadyada, laakiin in xannibaadda ay aad ugu yar tahay waddan caddeeyo inay is baadhay.
“Xaqiiqdii maahan in qofna la dacweeyo. Runtii waxay ku saabsan tahay in si dhab ah loo baadho dhacdooyinka,” ayuu yidhi. Taas ayaa ah in dacwad oogayaasha ay go’aan ka gaaraan, mana cadda in Israa’iil ay la shaqeyn doonto maxkamadda si ay isugu dayaan in ay caddeeyaan kiiskeeda.
Waxa kale oo jirta su’aasha ah in dacwad oogayaashu u arkaan jawaabta Israa’iil ee mudaaharaadyada tallaabo sharci ah ama dagaal hubaysan oo Xamaas ah.
Israa’iil waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqayaasha Xamaas ay ka mid ahaayeen dibad-baxayaasha, iyagoo qiil uga dhigaya shuruucdeeda xabbad-joojinta ee xaaladda colaadda muddada dheer u dhexeysay kooxda.
“Marka la eego iskahorimaad hubeysan, waxaad leedahay awood aad u weyn oo aad u adeegsan karto xoog wax dilaya xag-jiriinta,” Shany ayaa tiri. “Haddii tani ay tahay hawlgal sharci fulinta, markaa waa inaad asal ahaan isticmaashaa xakameyn dheeraad ah.”
Koox tahriibayaal ah ayaa isku dayay inay xoog ku galaan Poland iyagoo ka yimid Belarus, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha Poland. Warsaw waxay ku eedaysay Minsk inay isku diyaarisay “daandaansi.” ayay tiri wasaaradda
Muhaajiriinta ayaa teendhooyin ka sameysanayay xadka Poland ka dib markii ay isku dayeen in ay jebiyaan xayndaabka kala qaybinaya labada waddan horaantii Isniintii, sida laga soo xigtay ilo Belarusian ah. Kooxdan oo lagu qiyaasay inta u dhaxaysa laba ilaa saddex kun oo qof oo la sheegay inay ka kooban yihiin inta badan Kurdiyiinta Ciraaq iyo qoomiyado kale oo ay Soomaali kamid tahay ayaa ku soo dhawaaday xadka Belarus.
Tan iyo markii uu xumaaday xiriirka Belarus iyo Midowga Yurub, waxaa kordhay muhaajiriinta isku dayaysa in ay ka gudbaan Belarus, oo ay tagaan Poland oo ay halkaasi kaga sii gudbaan dalalka reer Yurub.
Muhaajiriin ka timid Soomaaliya ayaa ka mid ah kuwa waddadaasi isku daya inay Yurub ka galaan. Hase ahaatee waxa ay la kulmaan dhibaatooyin sida qabowga daran iyo barafku ka mid yahay.
Maxaa dhacay maanta?
Muuqaal laga soo duubay goobta ayaa u muuqday in ay muujinayaan ciidamo Belarusian ah oo la socday muhaajiriinta ku sugan dhanka xadka Belarus. Si kastaba ha ahaatee, isla markiiba suurtagal ma ahayn in la xaqiijiyo muuqaallada iyada oo maamulka Poland ay ka ilaalinayaan weriyeyaasha aagga xaalada degdeg ah, halka saxafiyiinta aan la safan dowladda ay haystaan ikhtiyaarro xaddidan oo ay uga shaqeeyaan Belarus.
Muuqaallada ay daabacday Wasaaradda Difaaca Poland ayaa sidoo kale muujinayay dad ku weeraraya siliga mandiilka iyaga oo wata majarafado iyo kuwo silig gooya, iyadoo ciidamada Poland ay ku buufiyeen daasadaha gaaska ee dayrka.
Wakaalada madaxa banaan ee Belarus ayaa sheegtay in muhaajiriintu ay ku guulaysteen inay burburiyaan qaybta xuduudka, laakiin ciidamada amaanka ee Poland ayaa ku guulaystay inay xidhaan jebinta iyagoo sameeyay khadka booliska. Ra’iisul wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa shir deg deg ah ka yeeshay isku daygii duulaanka ahaa.
Sidee ayuu Midowga Yurub uga jawaabay dhacdadaan?
Guddoomiyaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa ugu baaqday 27-ka waddan ee xubnaha ka ah ururka inay ansixiyaan cunaqabataynta dheeraadka ah ee ka dhanka ah “mas’uuliyiinta Belarus ee mas’uulka ka ah weerarkan isku-dhafka ah.”
“Masuuliyiinta Belarusia waa inay fahmaan in Midowga Yurub lagu cadaadiyo habkan iyada oo loo marayo qalab wax ku ool ah oo muhaajiriinta ah aysan ka caawin doonin inay ku guuleystaan ujeeddooyinkooda,” ayay ku tiri hadal ay soo saartay. Isticmaalka “muhaajiriinta ujeedooyin siyaasadeed waa wax aan la aqbali karin”, ayey tiri Ursula von der Leyen, iyada oo intaa ku dartay in Midowga Yurub uu sidoo kale eegi doono sida loo cunaqabateeyo “shirkadaha diyaaradaha” ee keena muhaajiriinta Belarus.
Maraykanku waxa kale oo uu Belarus ku dhaleeceeyay inay “abaabuleen” muhaajiriinta u qulqulaya Yurub. Ilaa iyo inta taliska iyo Belarus ay diidaan inay ixtiraamaan waajibaadkooda caalamiga ah iyo ballanqaadyada, waxay wiiqayaan nabadda iyo amniga Yurub oo ay sii wadaan cadaadiska iyo xadgudubka dadka doonaya wax aan ka ahayn inay ku noolaadaan xorriyadda, waxaan sii wadi doonaa cadaadiska Lukashenko mana yarayn doono. baaqyadayada ku aaddan isla xisaabtanka,” ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price oo saxaafadda la hadlay.
Waa maxay mowqifka Belarus?
Saraakiisha Belarusian ayaa ku eedeeyay dhinaca Poland inay sii kordhiyeen isku dhacyada, iyagoo sheegay inay isticmaaleen “sunta dadka ka ilmeysiisa.” Markii hore, mas’uuliyiinta Belarus waxay sheegeen inay qaadayaan “tallaabooyin lagama maarmaanka ah si loo hubiyo in ay si joogto ah u shaqeeyaan waddooyinka gaadiidka caalamiga ah.” Saraakiisha Belarus ayaa sidoo kale ku eedeeyay Poland inay mas’uul ka tahay tahriibinta muhaajiriinta.
“Tallaabadan quusta ah waxaa sabab u ah danayn la’aanta iyo habdhaqanka bini’aadantinimada ka baxsan ee maamulka Poland,” ayay yiraahdeen Saraakiisha Belarus.
Maxay yiraahdeen saraakiisha Polish-ka?
Poland ayaa ku eedeysay dowladda Belarusiya inay qorsheyneyso “daandaansi weyn” oo ay ku doonaysay muhaajiriin inay ka gudbaan xadka Poland Isniintii. “Belarus waxa ay dooneysaa in ay keento dhacdo weyn, gaar ahaan rasaasta la ridayo iyo dhaawaca,” ayuu wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Piotr Wawrzyk u sheegay raadiyaha guud ee Poland.
Hadalkiisa ayaa yimid ka dib markii Wasaaradda Difaaca Poland ay daabacday muuqaal ay soo duubeen dadka soogalootiga ah oo ku dhow magaalada xuduudka ku taal ee Kuznica.
Waa maxay sababta ay muhaajiriintu uga sii jeedaan Belarus?
Warsaw waxay si isdaba joog ah ugu eedaysay Minsk inay dhiirigelisay oo isku dubaridisay xuduudaha sharci darada ah ee laga galo Poland xubinta EU-da bilihii dhawaa.
Alexander Lukashenko oo u dhashay dalka Belarus ayaa aad uga carooday cunaqabateynta Midowga Yurub uu ku soo rogay dalkaasi, ka dib markii uu si ba’an ula dagaalamay mudaaharaadyo ka dhan ah dowladda. Brussels waxa ay ku eedaysay Minsk in ay “hubaysay” muhaajiriinta ka soo duushay caasimadda oo ay geysay albaabka Midowga Yurub.
Tan iyo bishii Luulyo, tiro badan oo muhaajiriin ah oo ka yimid Ciraaq, Suuriya, Soomaali, Yemen iyo gobollada kale ee dhibaatadu ka jirto ayaa isku dayayay inay si sharci darro ah ku galaan Midowga Yurub iyagoo sii maraya Poland, Latvia iyo Lithuania. Isla mar ahaantaana, Poland ayaa wajaheysa eedeymo ah in muhaajiriinta ay dib ugu riixayaan Belarus halkii ay ka siin lahaayeen fursad ay ku weydiistaan magangalyo.